I-Semalt: I-WordPress Ingane Yesihloko - Kungani & Kanjani Ukwakha
Ekuphileni kwangempela, izingane ziyizifazo zabazali, futhi zingakwazi ukujwayela kalula imikhuba emihle nembi kanye nezici zobuntu abadala. Ngesikhathi esifanayo, banezici ezithile eziyingqayizivele okungekho umama noma ubaba wabo abanike zona. Ungasho okufanayo ngezingqikithi ze-WordPress. Kuzo zonke izingqikithi ze-WordPress ozilandayo, ezithenga noma zokufaka, kunesihloko sezingane esizuze njengefa futhi esiqondiswe kahle esilandela izinhloso zakho ezahlukene.
Nansi ukubuka konke okuvela ku-Alexander Peresunko, onguchwepheshe ophezulu Semalt , ukuthi kungani futhi kanjani ukudala izingqikithi zezingane ku-WordPress.
Kungani udala i-Child Theme:
Izingqikithi zengane zingadlula futhi zizuze ama-templates, izakhiwo, nezitayela zezihloko zabo zomzali. Ku-WordPress, i-Child Theme ikhona ngokuzimela kepha isebenzisana nezihloko zomzali ukwenza ububanzi obubanzi bemisebenzi. Kuxhomeke kumzali futhi kungenziwa kusebenze kuphela uma isihloko somzali efakiwe futhi sisebenza kwiSayithi lakho le-WordPress. Ngenkathi udala isihloko sezingane, kufanele ukhumbule izinto ezimbili ezinkulu:
Kufanele wengeze isiqondisi esisha kwifolda negama lethempikha yengane yakho.
Ifayela lezitayela ze-styles.css kulomqulu omusha kufanele lifakwe ngolwazi oluthile lwenhloko.
Uma usudale isihloko sezingane, uzobona ukuthi sinolwazi olufanayo njengamathikithi womzali ajwayelekile. Isizathu esisodwa okudingayo ukudala izingqikithi zengane ukuthi bayatshela i-WordPress ukuthi yiziphi izindikimba zabazali ezifanelekile kumawebhusayithi athile.
Indlela yokudala i-Theme yezingane:
Ungakha kalula isihloko sezingane ngokugcina engqondweni amaphuzu alandelayo.
1. Engeza isiqondisi esisha somkhiqizo bese uhlela ifayela le-styles.css
Isinyathelo sokuqala ukwengeza isiqondisi esisha esihlokweni sakho esivele sikhona ngegama yengqikithi yengane yakho bese ulungisa izilungiselelo zalo. Isinyathelo esibalulekile, futhi akufanele wenze lutho ezitayela ifayela le-.css uma ungazi ukuthi ulihlela kanjani. Leli fayela likhona kusigaba se-Header ye-WordPress yakho futhi sinolwazi oluthile mayelana nesayithi lakho, indawo yalo, nokuqukethwe kwalo. Inkinga kuphela ukuthi ulwazi lwayo lwekhanda alukwazi ukuhlelwa kalula.Kodwa, uma wazi okuthile ngalezo ziciko, ungafaka ikhodi ethize kusihloko esihlokweni senhloko yakho.
2. Ukuhlela Isihloko Somzali
Kufanele uhlele kahle isihloko somzali futhi wazi konke mayelana nezitayela zalo ngenkathi udala isihloko sezingane ku-WordPress. Ukukhuluma ngobuqotho, azikho izitayela ezicacile, futhi kungenxa yokuthi izingqikithi zomzali zinezitayela ezizenzakalelayo. Noma kunjalo, ungawahlela ngesandla bese uskena ama-interwebs ngemiphumela engcono kusuka ekhonsathini yengane yakho.
3. Ukungeza ifayela lemisebenzi.php
Uma ubheka ukungeza ifayela lemisebenzi.php engxenyeni yakho yengane ukwenza kube ngcono kangcono kunangaphambili, kuzodingeka ufake ikhodi ethile bese uhlela izilungiselelo zendaba yakho. Manje siyazi ukuthi yini esiyidingayo ngezingqikithi zethu zezingane futhi sizidume ngokushisayo. Into engcono kakhulu ukuthi lezi zihloko zilula ukudala futhi zingahle zifake ngokwezifiso, zifakwe futhi zifakwe noma kunini. Ukwengeza, ungakwazi ukwengeza izinketho ezintsha ezingqikithi zengane ngokusekelwe ezimfuno zakho, kodwa sincoma ukuthi ungahleli noma iyiphi ikhodi noma ushintshe izilungiselelo zengane yengane ngenxa yokusetshenziswa kwayo okulinganiselwe nezinketho.
Izinto ezintathu ezithokozisayo okumelwe zenziwe ngezihloko zezingane
Manje uyazi izinto ezisisekelo zezingane zakho futhi ungenza izinto ezilandelayo kumnandi
1. Engeza Izinketho Ezintsha kwi-Customizer yayo - Ungangeza kalula izinketho ezintsha kwi-customizer yayo futhi uzokubona ithola zonke izici ezivela kumbongi womzali.
2. Engeza Izifanekiso Zezinhlobo Zezithombe Zeposi - Uma ngabe usebenzisa i-WooCommerce, ungase ufune ukungeza izifanekiso zomkhiqizo wangokwezifiso kumbono wakho wengane ukunikeza ukubukeka okukhangayo. Yengeze ekhonsathini yengane iqinisekisa ukuthi ngeke ulahlekelwe ikhodi lapho isihloko somzali sizibuyekeza.
3. Ukunyathelisa izakhiwo zomxholo womzali - Kufanele ubeke ngaphezulu izakhiwo izifanekiso ezinhlokweni zomzali. Enye yezindlela ezinhle kakhulu nezindlela ezilula kakhulu zokwenza lokho ukukopisha isifanekiso kusukela kumzali kubo esihlokweni somntwana bese uqala ukuyijwayela kusuka lapho Source .